lulu: ထမနဲ သို့မဟုတ် ထမင်းနဲ
ထမနဲ သို့မဟုတ် ထမင်းနဲ
at 5:44 PM Labels: ရိုးရာအစားအစာ
မြန်မာတို့ရဲ့ ၁၂ လရာသီမှာ တပို့တွဲလ ထမင်းနဲပွဲလို့ ဆိုတဲ့အတိုင်း ပွဲတော်များ လစဉ် ရှိပါတယ်။ နက်ဖြန် တပို့တွဲလပြည့်နေ့မို့ ဒီနေ့ဆို ထမနဲထိုးဖို့ ပြင်ကြတော့တာပေါ့။ ထမနဲထိုးခြင်းနဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြလေ့ရှိတယ်လို့လည်း လူကြီးသူမတွေကလည်း ဆိုကြပါတယ်။ တစ်ဦးတည်း တစ်ယောက်တည်း ကောင်းရုံနဲ့ ထမနဲကောင်းမဖြစ်လာနိုင်ပါဘူး။ ထိုးသားများအားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ အားသွန်ခွန်စိုက် အတိုင်အဖောက်ညီစွာနဲ့ လုပ်ကိုင်မှသာ ထမနဲကောင်းရတာမဟုတ်ပါလား။
အခုတော့ မိသားစုတစ်နိုင်စာ ထမနဲထိုးကြရအောင်နော့့့် လိုအပ်တာတွေကတော့ ကောက်ညှင်းတစ်ပြည်၊ မြေပဲ ၅၀ ကျပ်သား၊ အုန်းသီး တစ်လုံး၊ နှမ်း ၂ ကျပ်ခွဲသား (နှမ်းနက်ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်နော်)၊ ဆီ ၃၀ သား၊ ချင်းအနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဆားအနည်းငယ်တို့ပါနော်။
ကောက်ညှင်းကို သန့်စင်အောင် ရေဆေးပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၆ နာရီကြာအောင် ရေစိမ်ပေးထားပါနော်။ အုန်းသီးကို အုန်းမှုတ်ခွက်ကွဲအောင် ခွဲပြီးတော့မှ အုန်းသီးအသားတွေကို ပါးပါးလွှာလွှာလေးဖြစ်အောင်လှီးပေးထားပါ။ တချို့ကိုလည်း ခြစ်ပြီးတော့ အုန်းနို့ဦးရည်လေး နည်းနည်းယူထားပေးပါ။ ချင်းကိုလည်း အခွံနွှာ ရေဆေးပြီး ပါးပါးလေးတွေဖြစ်အောင် လှီးပေးထားပြီး တစ်နေလောက်တော့ လှန်းပေးထားပါနော်။ မြေပဲကိုလည်း အခွံနွှာပြီး လေးစိတ်ကွဲလေးဖြစ်အောင် ထုထောင်းပေးထားပါနော်။ နှမ်းကိုလည်း ဖုန်သဲ သန့်စင်အောင် လုပ်ပေးထားပြီး လှော်ပေးထားပါ။ ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်း ဓါးပြားရိုက်ပြီး အခွံနွှာပေးထားပါ။
အားလုံးအသင့်ပြင်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးတင်ပြီးတော့ လှီးထားတဲ့အုန်းသီးတွေထဲက တစ်ဝက်ကို မီးအသင့်အတင့်နဲ့ ကြော်ပေးပါနော်။ အုန်းကြော်လေး ရွှေဝါရောင်သန်းတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆယ်ယူပြီး ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲ သီးသန့်လေးဖယ်ထားပေးပါနော်။ ပြီးရင် မြေပဲကိုကြော်ပါမယ်၊ မြေပဲ ကျက်တာနဲ့ ပန်းကန်ထဲ ဆယ်ယူပြီး ထည့်ထားပေးပါနော်။ ပြီးတာနဲ့ လှီးထားတဲ့ ချင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကိုထည့်ပြီး ဆီသတ်ပေးပါ။ ကြက်သွန်ဖြူစိမ်းနံ့ပျောက်တာနဲ့ ရေစိမ်ထားတဲ့ ကောက်ညှင်းတွေကို ဆယ်ယူထည့်၊ ဆားနဲ့ သကြားအနည်းငယ်ဆီကိုလည်းထည့်ပြီး ဆီသတ်ပေးပါ။ ပြီးတာနဲ့ အုန်းနို့ဦးရည်နဲ့ ရေကို ကောက်ညှင်းအပေါ်ကနေ လက်တစ်ဆစ်ခွဲမှ နှစ်ဆစ်ခန့်မြုပ်တဲ့အထိ ထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ပြီးတည်ပေးပါနော်။ အောက်ခြေက မကပ်သွားရလေအောင် မီးကို အသင့်အတင့်ထားပြီး တည်ပေးပါ။ ရေခန်းခါနီးကျရင် အဖုံးဖွင့်ပြီး အုန်းသီးအစိမ်းဖတ်လေးတွေကိုထည့်ပြီး ယောက်မကိုယ်စီကိုင်ပြီး မွှေပါ။ ကောက်ညှင်းစေ့လေးတွေ ကြေသွားတာနဲ့ကြော်ထားတဲ့ အုန်းကြော်တစ်ဝက်နဲ့ မြေပဲကြော်တ၀က်တို့ကိုထည့်ပြီး အားမာန်အပြည့်နဲ့ တက်ညီလက်ညီ ယောက်မကိုယ်စီကိုင်ပြီး နှဲပါ။ နောက်ဆုံးကျတော့မှ နှမ်းဖြူးပြီး အားလုံးသမသွားအောင် မွှေပေးပါ။ အပေါ့အငံအရသာကိုမြည်းပြီး ဆားနဲ့ သကြားအနည်းငယ် ထည့်နိုင်ပါတယ်နော်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ စုပေါင်းအင်အားနဲ့ထိုးထားတဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံလှတဲ့ ထမနဲရပါပြီနော်။ ကျွန်မကတော့ ဒီညမှ အိမ်မှာ ထမနဲထိုးမှာပါနော်။ ကျွန်မ ညီမလေး ရတနာ မေးထားတာ ကြာပါပြီ။ ကျွန်မ အခုမှ တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
(မှတ်ချက်။ ။ မော်လမြိုင်က ကျွန်မအဘွားလုပ်နေကျ နည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ ရန်ကုန်က ထမနဲနဲ့တော့ ကွာမယ်ထင်ပါတယ်နော်)
Thank you for recipe. I'll try at home soon! :)
Can you tell me approximately how many cups with "rice cooker cups" for ကောက်ညှင်းတစ်ပြည်၊ မြေပဲ ၅၀ ကျပ်သား၊ ဆီ ၃၀ သား၊ and နှမ်း ၂ ကျပ်ခွဲသား?